वैज्ञानिक शोध : संसारभर बढ्दैछ सेक्सप्रति अरुचि, असर तपाईंमा पनि पर्यो कि ?
बीबीसी सेक्सको मामलमा अहिलेको समय मानव इतिहासमै सवैभन्दा उनमुक्त अवधि मान्न सकिन्छ । विगत चार दशक यता विकसित प्रविधिले यौन सम्बन्धलाई उन्मुक्ता दिएको छ, चाहे त्यो गर्भनिरोधक गोली होस् वा ग्रिंडर तथा टिंडर जस्ता डेटिङ एप्स । यो सवै मिलाएर यौन सम्बन्धलाई नयाँ उचाई दिन्छ । यति मात्र होइन सामाजिक मुल्य–मान्यताको देष्टिकोणबाट पनि समल..
किन पर्छ जुम्रा ?
सविना भट्टराई छालारोग विशेषज्ञ केएमसी अस्पताल मानिसको शरीरमा तीन प्रकारका जुम्रा..
काठमाडौँ, वैशाख २८ – आयातित औषधि चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको तथ्य फेला परेपछि त..
अन्तराष्ट्रिय बजार खोज्दै आँखाको लेन्स उत्पादन बृद्धि गरिने
काठमाडौँ, वैशाख २८ – उद्योग मन्त्रालयले तिलगङ्गा नेत्र विज्ञान प्रतिष्ठानले उत्प..
आँखारोग विशेषज्ञ : आँखामा समस्या भए गर्नुस यी ९ काम
डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल आँखारोग विशेषज्ञ धुलोमा नबस्ने । कुकुर, बिरालो नछुने । रू..
DOCTOR : शरीर झम्झमाउँछ यस्तो हुन सक्छ कारण
डा. केदार सेन्चुरी जनरल फिजिसियन हातगोडालगायत शरीरका विभिन्न भाग झम्झमाउने समस्या छ ? बसाइको आसन नमिल्दा कहिलेकाहीँ सामान्य अवस्थामा पनि झम्झमाउन सक्छ । तर, धेरै नै झम्झमाउने समस्या छ भने खेलाँची नगर्नुहोस् । यो समस्या विभिन्न कारणले हुन सक्छ । फिजिसियन डा. केदार सेन्चुरीले शरीर झम्झमाउने कारणहरु बताएका छन्: नसामा आघात शरीरको..
भकभकाउने मानिससँग बोल्दा…
डा. दीपक रेग्मी नाक–कान–घाँटीरोग विशेषज्ञ भकभकाएर बोल्नेले भन्न खोजेको कुरा मात्रै बुझ्ने गर्नुपर्छ । बिस्तारै बोल्ने अभ्यास गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । उसले र आफूले बोलेको बुझ्न नसकिने कारण एक–आपसमा आँखा मिलाएर बोल्दा राम्रो हुन्छ । उसको शब्द उच्चारणमा ध्यान दिने । किनकि, शब्द नै बोलीको मुख्य आधार हो । शान्त तथा चुपचाप भई उस..
DOCTER : हृदयाघातबाट बच्न यसो गरौँ
डा. प्रकाशराज रेग्मी मुटुरोग विशेषज्ञ वीर अस्पताल, काठमाडौं विश्वमा हुने मानव मृत्युमध्ये २५ देखि ३५ प्रतिशत कारण हृदयाघात रहेको पाइन्छ । यो सबैभन्दा धेरै संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने रोग पनि हो । मानिसलाई लाग्ने मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोगमध्ये सबैभन्दा खतरनाक रोग हो, हृदयाघात । कुनै पनि समयमा यो रोगले आक्रमण गर्न सक्ने हुनाले ..
स्वस्थ रहन वर्षमा एकपटक लामो उपवास
डा. दिनेशप्रसाद बराल सोहम योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, लोकन्थली हरेक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिउन चाहन्छ । स्वस्थ रहन प्राकृतिक चिकित्साका विभिन्न विधिमध्ये एक महत्वपूर्ण पद्धति हो, उपवास चिकित्सा । उपवास चिकित्सा सामान्तया छोटो, मध्यम र लामो गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । लामो उपवास भन्नाले सातदेखि १५ दिन वा त्योभन्दा बढ..
गहना छनोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?
घनश्याम रिजाल उपाध्यक्ष, नेपाल सुन–चाँदी कला व्यवसायी संघ अहिले विवाहको समय चलिरहेकाले धेरैको दैनिकी विभिन्न पार्टी तथा भोजहरूमा नै बित्ने गरेको छ । यस्ता जमघट तथा पार्टीमा ड्रेसअप, मेकअपसँगै सजिएर जान विशेष गरेर महिलालाई नभइनहुने अर्को सामग्री हो, गहना । सधैँ पार्टीमा जानका लागि फरक–फरक मोडेलका गहना खरिद गर्न पनि सकिँदैन । त्यस..
तपाईंलाई थाहा छ , भोजन गर्ने सही तरिका
डा. लोचन कार्की कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन बिहान उठेलगत्तै दूधचिया सकेसम्म नखानु नै राम्रो हुन्छ । कालो चियामै चित्त बुझाउनु स्वास्थ्यका लागि उत्तम हो । मौसमअनुसार उपलब्ध हल्का फलफूल ब्रेकफास्ट गर्ने । बिहानको खाना हल्का खाएकै राम्रो हुन्छ । ‘रिभर्स डाइटिङ’ गर्ने अर्थात् भात कम र तरकारी बढी खाने । कम भातले पेट अघाउँदैन भने तरकारी बढ..
नसा च्यापिएमा यस्तो हुन्छ असर
गोमा थापा फिजियोथेरापिस्ट अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटी मानिसको नसा च्यापियो भने शरीरमा असह्य पीडा हुन्छ । यसको असर खुट्टा र पिँडुलातिर पनि देखिन्छ । नसा च्यापिएको असरले गर्दा पिँडुला पोल्ने, बाउँडिने, ढाड तथा कम्मर दुख्नुका साथै जटिल समस्या देखिने हुन्छ । त्यस्तै, लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्न कठिनाइ हुने, कुनै ठाउँमा धेरै बेर बसे..
कल्पना पौडेल काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले पहिलोपटक प्रविधिजन्य सामग्री र उपकरणको खरिद र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त निर्देशिकालाई पारित गरेपछि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको मूल्य नि..
महिनावारीमा हुने पीडाबाट थाहा हुनेछ कति हुनेछ प्रसवपीडा
एजेन्सी बैशाख २६ – महिनावारीमा हरेक महिलाको अनुभव भिन्न हुन्छ । कसैलाई अत्यधिक समस्या हुन्छ भने कसैलाई कम । थुप्रै महिलाले त महिनावारीको हुँदा प्रकृतिलाई कति दुःख दिएको भनी गालीसमेत गर्छन् तर विश्वास गर्नुहोस् यी महिनावारीमार्फत् प्रकृतिले कुनै महिलालाई सन्तान जन्माउनका लागि तयार गराइरहेको हुन्छ । महिलालाई थप बलियो बनाइरहेका हुन..
सागसब्जीमार्फत बढाउनुहोस् कुनै पनि उमेरमा उचाई
ओन्ली माई हेल्थ बैशाख २५ – यदि तपाईं किशोरावस्था पार गरिसक्नुभएको छ र आफ्नो उचाईसँग खुसी हुनुहुन्न र आफ्नो हाइट बढाउने चाहमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो आहारमा केही सागसब्जी समावेश गरेर केही इन्च अग्लो हुनसक्नुहुन्छ । १. सागसब्जीको मद्दतले बढाउनुहोस् केही इन्च उचाईः आजकाल अग्लो देखिनु हामीमध्ये धेरै मानिसहरुका लागि एक सपनाजस्तो हो । अग्..
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरुको दाबी : लाखौँ भोट ल्याएर जित्छौँ
काठमाडौं, बैशाख २४ –बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि काठमाडौं महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवारहरुले काठमाडौँलाई देशकै नमुना सहर बनाउने प्रतिबद्धता, जित्ने आधार र दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । आईतबार काठमाडौमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीले नेपाली काँग्र..
एजेन्सी बैशाख २४ – फोबिया अर्थात् डर । वैज्ञानिकका अनुसार कुनै कुरासँग लगातार डराउनु नै फोबिया हो । थुप्रै मानिसहरुलाई यसको कारणले प्यानिक अट्याक पनि हुन्छ । हाइड्रोफोबिया (पानीसँग डर) र एक्रोफोबिया (उचाईसँग डर) को बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको होला तर आज हामी तपाईंलाई यस्ता ७ फोबियाबारे जानकारी दिँदैछौं जसबारे निकै कम मानिसलाई थाहा..
अविवाहित मानिस हुन्छन् राम्रा व्यक्तिः अनुसन्धान
बीबीसी बैशाख २३ – यदि तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ भने मानिसहरु तपाईंबारे विभिन्न धारणा बनाउने गर्दछन् । तपाईं निकै एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ होला । तपाईं कोही एकको खोजीको विषयमा तनावमा हुनुहुन्छ होला । यस्ता प्रकारका विभिन्न प्रश्न सोधिन्छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा बेला डी पाउलो प्रोजेक्ट साइन्टिस्ट हुन् । उनले यस विषयमा एक ले..
अस्पताललाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ, वैशाख २२ – सरकारले अस्पताललाई श्ययाका आधारमा नभई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पारित गरेपछि पहिलोपटक अस्पताललाई सेवा र गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गरिन लागिएको हो । यसअघि राज्यको संरचना र श्यया सङ्ख्याका आधारमा मात्रै गरिएकामा अबदेखि से..
मस्त निन्द्रा लाग्न सघाउने यी ९ खानेकुरा
टाइम्स अफ इन्डिया बैशाख २० – मिठो निन्द्रा स्वस्थ जीवनको कडी हो । तर तनाव, अव्यवस्थित जीवनशैली र अस्वस्थ खानपिनका कारण हामीमध्ये धेरैलाई राती निन्द्रा लाग्दैन । युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भानियाको एक नयाँ अनुसन्धानले मिठो निन्द्राका लागि कार्बोहाइड्रेट, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको आवश्यकता पर्ने बताएको छ । सुत्नुभन्दा अघि खाइने खाने..
कुकुरले टोक्यो ? तत्काल गर्नुहोस् यी ५ काम
एजेन्सी बैशाख २० – कुकुरले टोकेपछि संक्रमणको खतरा बढ्ने गर्दछ । तर थुप्रै पटक यो खतरा यति बढ्ने गर्दछ कि व्यक्तिको मृत्यु नै हुनसक्छ । यसबाट बच्नका लागि केही सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । कुकुरले टोकेपछि सबैभन्दा डर रेबिजको हुन्छ । रेबिज लागेका मानिसहरु पागल हुने गर्दछन् र जनावरजस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ । यदि समस्या […]
फोटोमा राम्री देखिन चाहनुहुन्छ ? यी १२ गल्ती नगर्नुहोस्
एजेन्सी बैशाख १९ – हामीमध्ये धेरैले फोटोमा राम्रो देखिन मज्जाको मेकअप गर्ने र क्यामरामा हेरे पुग्ने भन्ने बुझ्छौं । तर फोटो राम्रो देखिन फोटो खिचाउने मानिसमा पनि भर पर्छ । फोटोमा राम्रो देखिन ब्राइट साइडले विज्ञलाई सम्पर्क गरी केही सल्लाह सुझाव दिएको छ । यसले पक्कै पनि तपार्ईंलाई सहयोग गर्नेछः आफ्नो चिउँडो उठाउनुहोस् हात नबाँध्न..
ट्रमा सेन्टरमा ‘विस्तारित अस्पताल सेवा’ : शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नु नपर्ने
काठमाडौँ, १८ वैशाख । अब समय नपाएका कारण बिरामीले शल्यक्रिया गर्न लामो समय पर्खनु नपर्ने भएको छ । ट्रमा सेन्टरले वैशाख ५ गतेबाट ‘विस्तारित अस्पताल सेवा’ (इएचएस) अन्तर्गत नियमित समयपछि साँझ ५ देखि बेलुका ९ बजेसम्म शल्यक्रिया गरिरहेको छ । नियमित रुपमा दैनिक १२ वटासम्म शल्यक्रिया हुने सेन्टरमा सेवा विस्तार भएपछि थप चारवटासम्म शल्यक्..